Post Date 2020-12-18 11:01:36
प्रमुख अतिथिज्यू र सहभागी सदस्यहरूज्यूहरु,भक्तपुर नगरपालिका स्थापना भएको आज ७१ वर्ष पूरा भयो । २००६ सालमा स्थापना भएको नगरपालिका विभिन्न उतारचढाबबीच आजको स्थितिमा आइपुगेको छ । सांस्कृतिक नगरको पहिचान बोकेको भक्तपुर नगरपालिकाको विकास र प्रगति तथा यहाँका जनताको जीवनस्तर उठाउने जिम्मेवारी आज हाम्रो काँधमा आएको छ । निर्वाचित भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा हामी जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्दै आयौं । निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्न हामी कोसिस गर्दैछौं । कामको सिलसिलामा भएका कमी कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा गर्दै अझ बढी जनताको सेवा गर्ने भावनाले काम गर्दैछौं ।
यस चूनौतिपूर्ण घडीमा हामीले अत्यन्तै सचेततापूर्वक काम गर्दैछौं । हालसम्म भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कूल संक्रमितहरु १७५५ भयो भने १६५० जना निको भइसकेका छन् र हाल सक्रिय संक्रमितहरु ६१ मात्र छ । हालसम्म जम्मा ४४ को मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जनस्तरबाट सहयोगको आह्वान गरिएकोमा आ. व. २०७७÷७८ को साउनदेखि मंसिरसम्मको चार महिनामा विभिन्न संघ—संस्थाबाट प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु. ४० लाख ८० हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ ४२ पैसा रकम जम्मा भएको छ । नगरपालिकाको आह्वानलाई स्वीकार गरी सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संघ संस्था र महानुभावहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । कोभिड १९ रोग समुदाय स्तरमा फैलन नदिन एवं संक्रमितहरुको उपचार, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि हालसम्म भक्तपुर नगरपालिकाले रु. २ करोड ३१ लाख ४३ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
अन्त्यमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन पनि हामी जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर लागिरहेका छौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. रोहितले कल्पना गर्नुभएको ‘सय वर्षपछिको भक्तपुर’ हाम्रो सपना हो । हामी त्यसैलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिँदै काम गर्दैछौं । सांस्कृतिक प्रशिक्षण, सम्पदाहरुको संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधिहरु र मौलिकता संरक्षण यसैको सिलसिला हो । ढिलो या चाँडो हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनेमा आशावादी छौं । धन्यवाद ∕